के तपाईं स्मार्ट हुनुहुन्छ ? यस्ता हुन्छन् स्मार्ट व्यक्तिका बानी - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips के तपाईं स्मार्ट हुनुहुन्छ ? यस्ता हुन्छन् स्मार्ट व्यक्तिका बानी
के तपाईं स्मार्ट हुनुहुन्छ ? यस्ता हुन्छन् स्मार्ट व्यक्तिका बानी
हरेक व्यक्तिलाई आफू स्मार्ट बन्न मन पर्छ । स्मार्ट देखिनकै लागि त्यसै अनुरुपको पोशाकमा, सरसफाईमा ध्यान दिइन्छ । तर स्मार्ट हुनु भनेको बाहिरि रुपमा आकर्षित हुनु मात्र होइन ।
स्मार्ट व्यक्तिमा प्रश्न गर्ने बानी हुन्छ । उसले कुनै पनि कुरामा सकारात्मक आलोचना गर्न मन पराउँछ ।
स्मार्ट व्यक्ति नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक रहन्छ । उसलाई आफूमा के कमी छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ र त्यो कमीलाई आफ्नो क्षमताले जित्ने, आफ्नो सिकाइले जित्ने प्रयास गर्छ ।
स्मार्ट व्यक्ति आफ्नो तनाव र आवेगलाई कसरि व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सजग रहन्छ । त्यस्तै ऊ आफै संगको सम्बन्धमा रमाउन सक्छ । एक्लोपनलाई उसले तनावको रुपमा लिंदैन ।
स्मार्ट व्यक्ति एउटा कुरा जानेपछि त्यसमै भुलेर बसिरहन सक्दैन । ऊ सधै त्योभन्दा अगाडी बढ्ने प्रयास गर्छ ।
स्मार्ट व्यक्तिहरु अनुत्पादनशील कामप्रति आकर्षित हुँदैनन् । उनीहरु उत्पादनशील काम गर्नमा रमाउँछन् ।
स्मार्ट व्यक्तिहरुको सोंच फराकिलो हुन्छ । उनीहरुको दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तिको भन्दा फरक हुन्छ । उनीहरु नकारात्मक कुरामा पनि त्यसभित्र रहेको सकारात्मक कुरालाई खोज्न मन पराउँछन् ।
Previousटिममा कुशल नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ ? सहयोगी टिप्स
Nextगुरु सम्बन्धि प्रसिद्ध भनाइहरु